မျိုးဥထွက်၏သက်သေလက္ခဏာများ - ခွဲဝေ
မျိုးဥထွက်၏သက်သေလက္ခဏာတော်များကိုမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အပေါ်အသိအမှတ်မပြုရန်လွယ်ကူဖြစ်ကြသည်။ ရာသီစက်ဝန်း၏ပထမနှင့်ဒုတိယအဆင့်ကိုသာအနည်းငယ် features တွေသိရန်အဖြစ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုနားထောငျနိုငျရနျလုံလော။ သင့်ရဲ့သံသရာမျှမျှတတအဆက်မပြတ်သည်နှင့်အဘယ်သူမျှမဟော်မုန်းရောဂါ, 90% အထိမျိုးဥထွက်လျှို့ဝှက်ချက်များကိုအဆုံးအဖြတ်အတွက်တိကျမှန်ကန်မှုလျှင်။
မျိုးဥထွက်ဆုံးဖြတ်ရန်အလို့ငှာ, ငါတို့သည်သံသရာအတွက်တစ်ချိန်ချိန်ချထားပေးနေကြတယ်ဆိုတာကိုသိရန်သာလိုအပ်ပါတယ်။ ထိုခဏခြင်းတွင်ရာသီ၏အဆုံးပြီးနောက်ပုံမှန်အားဖြင့်ရက်အနည်းငယ်အတွင်း, မိန်းမလိင်အင်္ဂါကျေးရွာအုပ်စုကနေမဆိုဥတုသတိထားမိခဲ့ပါဘူး။ သို့သော်ဥတုသံသရာ၏အလယ်ဆီသို့, ပိုင်းတွင်အရည်ကိုပိုမိုပေါများဖြစ်လာ, အဲဒီနောက်ကော်။ ဤသည်ကိုယ်ခန္ဓာ၌ဟော်မုန်းပမာဏအတွက်အပြောင်းအလဲအဖြစ်သားအိမ်ခေါင်း၏တဖြည်းဖြည်းချင်းဖွင့်လှစ်မှုကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။
ကြီးမားသောဖုများကဖြန့်ချိနိုင်သည့် viscous ချွဲ၏ဇာတ်ကောင်, ဆည်းပူးမျိုးဥထွက်၏နေ့ကိုမီးမောင်းထိုးပြ။ ဒါကကြက်ဥမှသုက်ပိုးများ၏လျင်မြန်စွာတိုးတက်မှုများအတွက်သင့်လျော်သောပုလိင်အင်္ဂါကျေးရွာအုပ်စုအခြေအနေများအတွက်ချွဲဖန်တီးသောကြောင့်ကလေးမွေးဖွားဟုခေါ်သည်။ အဆိုပါချွဲအဖြူရောင်သို့မဟုတ်အဝါရောင်-အညိုရောင်အရောင်နဲ့ပန်းရောင်အလင်းတန်းများဖြာဖြစ်နိုင်သည်။ ချက်ချင်းမျိုးဥထွက်ကြီးစွန်းပြီးနောက်, ချွဲပြီးစီးခဲ့သည်နှင့်တစ်ဦးစိုးမိုးရေးအဖြစ်, အမျိုးသမီးများသံသရာ၏အဆုံးသည်အထိမည်သည့်ဥတုသတိထားမိကြပါဘူး။
မျိုးဥထွက် Secret ၏ပြဌာန်းခွင့်မိန်းမကတခြားကနေတစျခုအဆင့်တစ်ရွေးချယ်ရေးပြောပြရန်မည်သို့မည်ပုံသိတယ်လျှင်မြင့်မားတိကျမှန်ကန်မှုရှိပါတယ်, နှင့်နီးကပ်စွာတစ်ခုလုံးကိုသံသရာစဉ်အတွင်းရိနာစွဲစောင့်ကြည့်။
မျိုးဥထွက်၏ဥတု၏သဘောသဘာဝမှာဖြည့်စွတ်ကြောင်းအင်္ဂါရပ်များအတွက် Ovary ဘယ်မှာမျိုးဥထွက်အတွက်ခြမ်းဆွဲနေတဲ့ချွန်ထက်ခုန်ဟော်မုန်းနှင့်ဉျြးဖဉျြးသို့မဟုတ်နာကျင်မှုနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသောသေးငယ်တဲ့သွေးထွက်၏အသွင်အပြင်ဟုခေါ်တွင်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Basal အပူချိန်တိုင်းတာအားဖြင့်မျိုးဥထွက်၏အချက် (တံတွေးများနှင့်ဆီးတွင်) အထူးစမ်းသပ်မှု အသုံးပြု. ရနိုင်တည်ထောင်ရန်နှင့်နေ့စဉ်အခြေခံပေါ်မှာ။ ဤအမှုနည်းလမ်းများများ၏ပေါင်းစပ်သင်သည်မှန်ကန်စွာမျိုးဥထွက်စတင်ခြင်းခွဲခြားသတ်မှတ်ကြောင်းသေချာ။
ထိုကဲ့သို့သောစိတ်ဖိစီးမှုသို့မဟုတ်အစားအစာအဖြစ်ပြည်တွင်းရေးသို့မဟုတ်ပြင်ပအကြောင်းတရားများ, ၏ရလဒ်အဖြစ်သံသရာကနေသံသရာမှ, အမြိုးသမီးတမတည်မငြိမ်ဖြစ်ပြီး Hormones, နှောင့်အယှက်တွေ့ကြုံခံစားစေနိုင်သည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, တစ်နှစ်လျှင် 1-2 ရာသီသံသရာမျိုးဥထွက်ခြင်းမရှိဘဲလွန်သွားနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မကြာခဏအမျိုးသမီးတစ်ဦး၏တစ်ခုလုံးကိုစက်ဝန်းကာလအတွင်း Selection ကိုပြောင်းလဲမှုများကိုမှတ်သားမထားဘူးကြောင်းတွေ့ကြုံတတ်၏။ ထိုအမျိုးဥထွက်ရိနာစွဲသံသရာအလယ်၌အသံထွက်မပေးပါ။
အမျိုးသမီးတွေအတွက် estradiol တိုးမြှင့်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
IVF ကလေးများ - အနာဂတ်၌အကျိုးဆက်များ
Prolactin - လူတို့သညျအဘို့အနှုန်း
IVF နှင့်အတူ follicles ထိုးဖေါက်ခြင်း
ကြက်သွန်အခွံ - contraindications
ခေါင်းပေါ်မှာ Scaly အသားအရေ
အက်ရှလေဂရေဟမ်, အမ်မလီ Ratazhkovski နှင့် Kendall Jenner အသစ်ကခရစ္စမတ်ပြက္ခဒိန် roller လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအချစ်
Phenazepam - ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ
မိုက်ကယ် Fassbender « Tomb Raider ၏ Premiere မှာသူ့ဇနီးသူ Alicia Vikander ထောက်ခံထားပါတယ်: Lara Croft "လန်ဒန်မှာ
Sparaxis - ဘိန်းစိုက်ပျိုးမှုနှင့်စောင့်ရှောက်မှု
ဘဲဥပုံမျက်နှာများဘို့က Short ဆံပင်ညှပ်
Arugula သုပ် - အကျိုးခံစားခွင့်များနှင့်ပျက်ဆီး
ကို Socks Sledkov